Original ikhava yangemuva for Playbook BlackBerry — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Original ikhava yangemuva for Playbook BlackBerry
Uma ufuna ukushintsha igugile cover futhi "uvuselele" look of wakho Playbook, phawula ikhava original, ngoba ingabe nse njengoba ekucushweni original smartphone. Izinga kanye nomklamo BlackBerry.
Ngemuva Ikhava — ukuthi ingxenye Playbook, okuyinto kuqala eshaya iso kule — ke ngobukhulu bayo. Indlela engcono kakhulu ukunikeza look fresh kuya plate — buyisela cover agugile obusha. Original ikhava yangemuva for BlackBerry Playbook uphelele le njongo, ngoba kuyinto nse njengoba kwakunjalo ku plate yakho ngesikhathi sokuthenga.
On ikhava efakwe Ilogo ngoba metal emuva amboze BlackBerry Playbook.
BlackBerry Playbook ikhava eyenziwe ngepulasitiki kanzima futhi kuvumelana ncamashi ukufakwa. Shintsha yayo eziyinkinga, futhi uma unenkinga, Ukukhipha ikhava yangemuva service contact, ongoti bethu uyokusiza.
Sicela uqaphele, ikhava ezingemuva for the ezinguqulweni ezihlukahlukene Playbook (Wi-Fi, 3G / 4G) ahambisanayo. Uhlobo 32 futhi 64GB niyafanelana, kodwa ohlangothini abe mshini ezahlukene. Uma unemibuzo, sicela uxhumane uchwepheshe wethu.
On a cover version 3G / 4G nazo ufake antenna kanye kunesikhala for the slot SIM khadi.
Original ikhava yangemuva for Playbook BlackBerry, Black, ngoba 3G / 4G-version, 32GB PBDOOR-O-3G-32GB ●
Original ikhava yangemuva for Playbook BlackBerry, Black, i-Wi-Fi-version, 64GB PBDOOR-O-WIFI-64GB ●
Original ikhava yangemuva for Playbook BlackBerry, Black, i-Wi-Fi-version, 32GB PBDOOR-O-WIFI-32GB ●
Black, ngoba 3G / 4G-version, 32GB PBDOOR-O-3G-32GB
Black, i-Wi-Fi-version, 64GB PBDOOR-O-WIFI-64GB
Black, i-Wi-Fi-version, 32GB PBDOOR-O-WIFI-32GB